Salada Ethereum ImToken leeyahay $ 35B ee kayd, in ka badan 99% ee bangiyada Maraykanka - Blockchain News
ImToken Salada Ethereum
Shiinaha ku salaysan ImToken, mid ka mid ah boorsooyinka ugu horeysay Cryptocurrency iyo Ethereum ku qoran App Store Apple ah, ayaa baaraandegi ka badan $ 35 bilyan oo kayd ka badan dhowrkii sano ee la soo dhaafay, outperforming Coinbase.
Similar in Blockchain, MyEtherWallet iyo MyCrypto, ImToken waa jeebka oo lacag la'aan ah iyo non-portal u ogolaanaya dadka isticmaala in ay ku kaydiso, diro loona helo cryptocurrencies sida Ethereum halka xafidaada buuxda gacanta furayaasha iyo xisaabaadka gaarka loo leeyahay ay.
Oo wakhtigii hore ee Ethereum, ka hor inta aan soo koraya boorsada caanka ah sida MyEtherWallet iyo MetaMask, ImToken ahayd lagu kalsoonaan karo oo kaliya dadka isticmaala jeebka mobile isticmaali kartaa on qalabka mobile. ImToken ayaa faa'iido-fidmad ka hore iyo xog ah ee app ay keentay in madal haya in ka badan $ 35 bilyan oo kayd, oo ka dhigan in ka badan 99 boqolkiiba bangiyada Maraykanka.
Meey dhexdeeda, Bloomberg ayaa sheegay in Xapo, kaas oo la warshadeeyey ka badan $ 10 bilyan oo lacag dhigaal ah saddexdii sano ee la soo dhaafay, ayaa ka badan lacag dhigaal ah ay ka badan 5,670 bangiyada dalka Mareykanka ah ama 98 boqolkiiba ee bangiyada ee dalka. $ 35 bilyan oo kayd for ethers iyo cryptocurrencies kale ka dhigi lahaa top ImToken ah 0.5 boqolkiiba, oo ay weheliyaan bangiyada waaweyn iyo hay'adaha maaliyadeed.
Investment ka Capital Chinese VC Giant IDG
IDC Capital ee ku salaysan Shiinaha ImCrypto, taas oo ah mid ka mid ah shirkadaha caasimada u ganay ugu weyn ee Asia, heshay a $ 10 million wareega maalgelinta Isbuucaan. IDG Capital ayaa maal badan 700 shirkadaha leh 150 laga baxo guul, oo ay ku jiraan shirkadaha multi-bilyan oo dollar sida G telefoonka mobile Xiaomi, gaare batari wearable Anker, cryptocurrency shirkadda Circle iyo isku bedelasho ah cryptocurrency Coinbase.
Habka ganacsiga ee ImCrypto ay la mid tahay in Blockchain iyo dhufto ee kale ee go'doominta non-saldhig. Sababtoo ah halka ay ka shaqeynayaan hufan iyo software lacag la'aan ah, waxa ay leedahay il deggan dakhliga ma. Inkasta oo daacad u ah madal ImCrypto ugu danbeyntii keentay in ay guul muddada-dheer, dhib ah ee monetizing ImCrypto inkastoo balaayiin dollar ku kaydsan madal laga daawan lahaa sida dhibaato weyn by maal-, gaar ahaan shirkadaha caasimada u ganay, in industry ee technology dhaqanka.
IDG Capital ee $ 10 milyan oo maal ayaa muujiyay kalsoonida koritaanka muddada-dheer ee ka shaqeeya cryptocurrency iyo boorsada jeebka ah. Inkasta oo boorsooyinka non-boostada-free hadda lahayn iibka iyo xadad faa'iido hooseeyo, shirkadaha caasimada u ganay weli ay maamulaan malaayiin doolar ku kacaya ee maalgelinta, garashada iman kara ee boorsada cryptocurrency.
“Waxaan aqoonsanay iman kara ee Ethereum marxalad aad u hore iyo diiradda on nafteena kala tartamayaasha, koritaanka ahaa si buuxda u organic, waxaan lahaa ma suuq ama advertising miisaaniyadda,” ayaa sheegay in aasaasaha ImToken Ben wuxuu, oo sheegaya in IDG caasimada ka shaqeeya dhowaan heleen awood u lahaa shirkadda inay ku baaqaan in suuq-geynta iyo ballaarinta dagaal badan ee suuqa ku cryptocurrency.
Trust ka maal-
Recently, wareysi uu siinayay Bloomberg Television, Dan Morehead, CEO of Pantera Capital, a $ 1 billion cryptocurrency fund deyr, ayaa sheegay in ku qiimaysay suuqa cryptocurrency ee ka badnayn laga yaabaa in $ 40 trillion mustaqbalka fog.
“The $ 400 billion suuqa crypto gaadhi karo $ 4 trillion, iyo xataa $ 40 trillion hubaal waa suurto gal, waxaa Saadaasha 10-sano ah, waxaa habeen ma dhici doonto,” ayuu yiri Morehead.
Oo baaxad weyn shirkadaha caasimada u ganay iyo lacag ku heraaray guud ahaan rajo ah oo ku saabsan nooca muddo dheer suuqa cryptocurrency ah oo aad aaminsan tahay cryptocurrencies noqon doonaa fasalka weyn hantida in la hanti dhaqanka iyo nidaamka dhaqaale ee caalamka ku tartami doona.
Sidee mid saadaalin dhaqanka ee heerka of cryptocurrency ah marka la eego tirada amarada p ...
Waa maxay nooca o ah ...